ပြည်ထောင်စု ရန်ပုံငွေ ကျပ် ၁၉၂၈၁ သိန်းကျော်ဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည?? - Yangon Media Group
ပြည်ထောင်စု ရန်ပုံငွေ ကျပ် ၁၉၂၈၁ သိန်းကျော်ဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည??
မော်လမြိုင်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း မွန်ပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ ကျပ် ၁၉၂၈၁ ဒသမ ၄ သိန်းဖြင့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ကျေးလက်လမ်း၊ ကျေးလက်တံတားနှင့် ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (နည်းပညာ)ဦးဝင်းနိုင်က စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီ တူဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
”ဒီနှစ်အတွက် ခွင့်ပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ ကျေးလက်လမ်းက Lot ခုနစ်ခု၊ ကျေးလက်တံတား Lot သုံးခု၊ ကျေးလက်ရေရရှိရေးက Lot ကိုးခုအားလုံးပေါင်း Lot ၁၉ ခု၊ Lot လိုက်ရတာက ကုမ္ပဏီတွေကိုက တင်ဒါတင်သွင်းထားတယ်။ တင်ဒါစိစစ်ပြီးပြီ။ ပြည်နယ်အစိုးရရုံးကိုတင်တယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရဆီက ခွင့်ပြုချက်ကျတာနဲ့ တင်ဒါအောင်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုကြေညာပြီး စာချုပ်ချုပ်ဆို လုပ်ငန်းစတော့မှာ။ လုပ်ငန်းအားလုံးက ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘတ်ဂျက်ကာလအတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်ရပါမယ်”ဟု ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ယခုနှစ်ဘတ်ဂျက်တွင် ကျေးလက်လမ်းအတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ် ၉၈၁၉ ဒသမ ၃ သိန်း၊ ကျေးလက်တံတားအတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ် ၅၇၁ဝ သိန်း၊ ကျေးလက်ရေရှိရေးအတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ် ၃၇၅၂ ဒသမ ၁ သိန်း စုစုပေါင်းရန်ပုံငွေ ကျပ် ၁၉၂၈၁ ဒသမ ၄ သိန်းရရှိ ခဲ့ပြီး Lot ၁၉ ခုခွဲကို တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ကာ တင်ဒါလျှောက်လွှာများကို ကော်မတီဖြင့် စိစစ်၍ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
ဗြိတိသျှပြတိုက်သို့ ရောက်ရှိနေသော ရှေးဟောင်း နို့တိုက်တိရစ္ဆာန်ရုပ်ကြွင်းများကို ချီလီ ပြ?
Fast & Furious9ရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင်လာမယ့် ချာလစ်သီယွန်နဲ့ ဟယ်လင်မီရန်း